စီးပွားတက်ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်….
July 8, 2019 Thuta Star 0
အရမ်းကောင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ပိုင်အိုးနီးယား စားသောကဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မိုးပြောပြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ယတာချေနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖတ်ကြည့်ပါ လင်နှင့်မယားချစ်ကြင်ငြားစီးပွားတက်မည်သာ စီးပွားတက်ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်ရင် စီးပွားမတက်တာလဲ။ ရန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်မိတော့တာကိုး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်တဲ့အချိန်က နက္ခတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။နက္ခတ်ကောင်းရင် စီးပွားတက်မှာပဲ။ နက္ခတ်ကောင်းဖို့ ယတြာချေနေဖို့ […]
လက်ရေးအလှပြိုင်ပွဲမှာ ..လက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့ ကလေးမလေးက.. အနိုင်ရရှိ…
မွေး ရာ ပါ လက် နှစ်ဘက်မပါတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ လက်ရေးလှပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မေရီလန့်ပြည်နယ်က ဆယ်နှစ်အရွယ် ဆာရာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊ ဇာနာဘလိုဇာလက်ရေးအလှပြိုင်ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးများ လက်ဖျားခါလောက်အောင် အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဆု ကေ တာ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း […]
တနင်္လာ ဗုဒ္ဓဟူး အင်္ဂါ စနေ သားသမီး များ ယခုနှစ် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲကုန်အံ့…
ဗုဒ္ဓဟူး ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ စုတ်ရော စန်းပါပွင့်ကာ အိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိအံ့ သားသမီးရတာ ထွန်းကားအံ့ ရွေရော ငွေရော ဝင်ကာ မြဲအံ့ အလှူအတန်းများ ပြုရလတ္တံ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များရလတ္တံ ရာထူးတိုးလတ္တံ အလုပ်အကိုင် စီးပွား အစစအရာရာ အဆင်ပြေမည့်နှစ်ဖြစ်လတ္တံ ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်မရှိ ရေချိုးမှား လတ္တံ […]
ကန့်ဘလူမြို့နယ် ရွှေဘို- မြစ်ကြီးနား လမ်းပေါ်တွင် ငှက် ပျောတိုင်းအမည်ရှိ ကျေးရွာတစ် ရွာရှိသည်။ ထိုကျေးရွာ၏ အ နောက်ဘက်တွင် ရွာဟောင်းရှိပြီး ရွာဟောင်း၏ အနောက်ဘက် ခပ်ကျကျ၌ ကုန်းမြေအနိမ့်အမြင့်များသည့် တောတိုက်ဟူသော နေရာတစ်ခုရှိသည်။ တောတိုက် တွင် အိမ်ခြေအချို့ ဟိုနားတစ် အိမ်၊ သည်နားတစ်အိမ် ခပ်ကျဲ […]
သူ့ ဘဝကိုကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဖိနပ်လေးတစ်ရံကြောင့်ပါ ဆိုတဲ့ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကျော်ဇင်လွင်…
မြန်မာလက်ရွေးစင် နောက်ခံကစားသမား ကျော်ဇင်လွင် (၂၈) ကြိမ်မြောက် အရှေ့ တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ မှာ မြန်မာ ယူ-၂၃ နဲ့အတူ နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူဟာ ဘောလုံးသမား တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးကောက် ဘဝကနေ မြန်မာလက်ရွေးစင် ကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက် မလျှော့သော […]
လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နားနဲ့မဆံ့အောင် ကြားနေရတဲ့ နေပြည်တော်က သမီးလေး Victoria ရဲ့မုဒိန်းမှုကတော့ ပြည်သူတွေရော အနုပညာရှင်တွေပါ အင်တိုက်အားတိုက် ဝန်းရံနေကြတာတောင် အခုအချိန်အထိ တရားခံကို ဖမ်းမမိသေးပါဘူး။ သမီးလေး Victoria ရဲ့အမှုကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် Cobra ကလည်း […]
သင်းသင်းရဲ့ နာမည်တပ်ပြီး ပြောခြင်းခံရတာကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ မို့မို့မြင့်အောင်
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးလကွံမှုတွေကို ရရှိထားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး မို့မို့မြင့်အောင်ကတော့ နာမည်တပ်ပြီးတော့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်မရမ်းဖို့ ပြောခံထားရတာကို Cele yatkwat ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြန်လည် တုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင့် မိုးအောင်ရင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး […]
WISDOM HILL မူကြိုကျောင်း သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့အဓိကသက်သေ ဆရာမနှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေ….
Wisdom Hill ကလေးမူကြိုကျောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိက မျက်မြင်သက်သေဟု ယူဆဏသော ဆရာမလေး နှင်းနု ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ tomorrow သတင်းဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့အမှုမှာ အဓိကသက်သေဖြစ်နေတဲ့ နှင်းနုဆိုတဲ့ ဆရာမနဲ့ ဂျူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက် အင်တာဗျူးထုတ်လွှင့်အပြီးမှာ […]
ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ဆရာဦးပညာ မပြောသင့်ဘူးလို့ထင်ပြီးနေခဲ့တာ အခုတော့ ဆရာနဲ့ အတူ တခြား ဆရာ/ဆရာမတွေ ကျောင်းသိက္ခာတွေ လုံးပါးပါးတော့မယ် WISDOM HILLဆိုတာ ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်က အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပါ ။ WISDOM HILLမှာ တိုက်ကွမ်ဒိုနည်းပြအဖြစ် ဧပြီလကုန်ထိ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့ ကိုနည်းပြအဖြစ် ယုံကြည်စွာ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့လို့ […]
အကြည့်တချက်နဲ့တင် နှလုံးခုန်သံတွေ ရပ်တန့်သွားမယ့် နေခြည်ဦးရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်တချို့
အကြည့်တချက်နဲ့တင် နှလုံးခုန်သံတွေ ရပ်တန့်သွားမယ့် နေခြည်ဦးရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်တချို့ Beauty blogger မလေး နေခြည်ဦး ကတော့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း သူမရဲ့အလှကို ယုံကြည်မှုရှိသလို မိန်းကလေးတွေ ကိုလည်း ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ လှစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဝေမျှပေးလေ့ ရှိသူ တဦးမို့ ချီလီလေးတွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို […]